Ogaden News Agency (ONA) – Faallo: Maxaad Kala Socotaa Kiniisadda Godey? (Mac’had-Kiniisadeedka).
Faallo: Maxaad Kala Socotaa Kiniisadda Godey? (Mac’had-Kiniisadeedka).
Posted by ONA Admin	/ September 28, 2018
Siday ila wadaageen walaalo xog-ogaal ah wuxuu Kiniisaddan dhismaheedu billowday kala wareegga sanadihii 2011 iyo 2012. Waxay ku-dhinac-taallaa Xabsiga dhexe ee Magaalada Godey, (Hilada Dakhal Bardaale) oo Webiga Shabeelle dhiniciisa ah.
Dhismaha Kiniisaddi wuxuu ku fadhiyaa dhul qiyaastii la iigu sheegay 1 km2, walow aan weli dhulkaas oo dhan la dhisin. Kiniisaddan Kaatooliga ah waxaa Aas’aasay islamarkaana maamula nin Baadari ah oo magiciisa lagu sheegay Christopher Hartley Sartorios, loona badinayo inuu asalkiisu yahay Talyaani.
Baadarigan oo ah kuwa Mad’habka u qaabilsan ku faafinta diinta kiristaanka ee dalalka dibadda ayaa si xeeladaysan u billaabay mashruucan oo hadda meel fiican u maraya.
Muddadii uu dhismuhu socday waxaa laga fogaaday inay dadka reer Godey ku baraarugaan waxa meesha laga dhisayo, sababtoo ah waxaa la qariyey sababta dhulkan loo dhisayo, waxaa la yareeyey shaqaalaha iyo gaadiidka dhismahan ka qayb qaadanaya, waxaa hoos loo dhigay xawaaraha uu dhismuhu ku socdo, iyadoo hawsha laga billaabay dayr-wayn oo lagaga gaashaanto indhaha dadka.
Ilo-wareed lagu kalsoon tahay waxay ii sheegeen inayna meeshu ahayn oo kaliya Kiniisad, ee ay tahay Kooleej-kiniisadeed wax lagu baro caruur yar-yar oo Soomaaliyeed.
Waxaa la ii sheegay in caruurtan intooda badan laga soo ururiyey Degmooyinka Qallaafe, Mustaxiil iyo Godey oo xaruntii ah. Caruurtan waxay da’doodu u dhaxaysaa 5—14 jir. Waxay xogtu sheegaysaa in bartilmaameedku yahay caruurta aan waalidiinta lahayn iyo kuwa kasoo jeeda qoysaska dan-yar ah.
Hadafka wayn ee Baadari Christopher, waxaa lagu sheegay inuu yahay in Mac’hadka ugu wayn Mad’hadka Kaatooligga ee bariga Afrika laga furo Magaalada Godey, dhismaha Kiniisadduna uu sidaas u qaabaysan tahay.
Waxaa xiisa leh in Hay’adda ‘SOS’ ee caruurta Waalid la’aanta ah gargaartaa Xarunteeda saddexaad ee Godey ay mashruucan si aan toos ahayn ugu lug leedahay, kuna gacansiiso Baadarigan soo ururinta Caruurta dayacan, si xeeladaysan.
DIGNIIN IYO BAAQ :
Waxaa looga digayaa Waalidiinta gobalka Shabeelle guud ahaan, gaar ahaan magaalooyinka Godey, Qallaafe iyo Mustaxiil halista mashruucan caruur-gaalaysiinta ah. Waxaa loogu baaqayaa maamulka M/Wayne Mustafa Omer inay mashruucan dabagal iyo baadhis deg-deg ah ku sameeyaan.